ITC ကတ်ဖြင့် ကုန်သွယ်မှု လိုင်စင် ထုတ်ယူခြင်းကို မြဝတီ ကုန်သွယ်ရေးဇုန်တွင် အွန်လိုင်းစနစ်ဖြင?? - Yangon Media Group
ITC ကတ်ဖြင့် ကုန်သွယ်မှု လိုင်စင် ထုတ်ယူခြင်းကို မြဝတီ ကုန်သွယ်ရေးဇုန်တွင် အွန်လိုင်းစနစ်ဖြင??
တစ်ဦးချင်း ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်(ITC)ကတ်ဖြင့် ကုန်သွယ်မှုလိုင်စင်ထုတ်ယူခြင်းကို မြဝတီကုန်သွယ်ရေးဇုန်တွင် အွန်လိုင်းစနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင် ပြီဖြစ်ကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှသိရသည်။ ယခင် Manual လုပ်ငန်းစဉ်များဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိ သော ITC Card ထုတ်ပေးခြင်း၊ ITC Card ဖြင့် လိုင်စင်ထုတ်ပေး ခြင်းတို့အား ယခုအခါတွင် မြဝတီ ကုန်သွယ်ရေးဇုန်၌ Online (Computerized Syste)ဖြင့် ဆောင်ရွက် ပေးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ”မြဝတီကုန်သွယ်ရေးဇုန် မှာ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လိုင်စင်တွေ ထုတ် ပေးတာကို Border Trade Online System စနစ်နဲ့ ၂ဝဝ၇ ခုနှစ်ကတည်းက စတင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် ITC Card ထုတ်ပေးတာ ITC ကတ်နဲ့ လိုင်စင်ထုတ်ပေးတာကို Manual နဲ့ပဲ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါ တယ်။ အခုအခါမှာ ဒေသခံတိုင်းရင်းသား လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ ITC Card ထုတ်ပေးတာ ITC ကတ်နဲ့ လိုင်စင်ထုတ်ပေးတာတွေကို အွန်လိုင်းစနစ်နဲ့ ဆောင်ရွက်လို့ရပြီဖြစ် ပါတယ်။ အွန်လိုင်းနဲ့ ဆောင်ရွက်ရတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် လုပ်ငန်းရှင်တွေ အနေနဲ့ အချိန်ကုန်၊ လူပင်ပန်းသက်သာစေပြီး ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုလည်း လျှော့ချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု နိုဝင်ဘာ ၁၄ ရက်က ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ပြောသည်။
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနသည် ဒေသခံတိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်တွေ ရိုးရှင်းလွယ်ကူစွာကုန်သွယ်မှုဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊ တရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုများ တရားဝင်လမ်းကြောင်းပေါ်သို့ ရောက်ရှိလာပြီး ကုန်သွယ်မှုပမာဏ တိုးမြင့် လာစေရန်နှင့် နိုင်ငံတော်အတွက် ရသင့်ရထိုက်သော အခွန်အခများ တိုးတက်ရရှိလာစေရန် ရည်ရွယ်၍ ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ဖို့ မလိုသောတစ်ဦးချင်း ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်(ITC) ဖြင့် ကုန်သွယ်မှု ပြုခြင်းကို ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ်က စတင်ခွင့်ပြုပေးလျက် ရှိကြောင်းသိရသည်။
၎င်းက ”ကုန်သွယ်ရေးစခန်း တွေမှာ ITC ကတ်နဲ့ ပို့ကုန်တင်ပို့မှုများတဲ့ စခန်းတွေရှိသလို သွင်းကုန်တင်သွင်းတာများတဲ့ စခန်းတွေလည်းရှိတယ်။ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု မတူညီနိုင်ဘူး။ ရေကြောင်းနဲ့ အသွားများတဲ့ နေရာတွေဆို ITC ကတ်နဲ့ ကုန်သွယ်မှုမလုပ်ကြဘူး။ ဒေသ ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်တဲ့ အပေါ်ပဲ မူတည်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာလအတွင်းမှာ မြဝတီကုန်သွယ်ရေးဇုန်ကနေ သွင်းကုန်လိုင်စင်ပေါင်း ၃၅၂ စောင် ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ လိုင်စင်တွေအနက် ITC နဲ့ သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားမှုက ၁၇၄ စောင်၊ တန်ဖိုးအားဖြင့် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၄၄၁ သန်းရှိပါတယ်။ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့တွက်ရင် ITC Card နဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုက ၁၄ ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
မြဝတီ ကုန်သွယ်ရေးဇုန်တွင် ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၄ ရက်မှ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်အထိ ITC Card ထုတ်ပေးမှု အနေဖြင့်၂၄၇ ကတ်ရှိခဲ့ပြီး ပယ်ဖျက် ၄၁ ကတ်ဖြစ်သည့်အတွက် စုစုပေါင်း ၂ဝ၆ ကတ်ထုတ်ပေးနိုင် ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ မြဝတီဒေသခံကုန်သည် ဦးလှမြင့်အောင်က ”ITC ကတ်နဲ့ကုန်သွယ်မှုမှာ လုပ်ငန်းသုံး ကုန်ပစ္စည်းတွေ၊ လူသုံးကုန်၊ အိမ်သုံး ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ စက်ကိရိယာအပို ပစ္စည်းတွေကို အများဆုံးတင်သွင်း မှု ပြုလုပ်ကြတယ်။ အဓိကတင်သွင်းတာက မော်တော်ဆိုင်ကယ် ဖြစ်ပါတယ်။ ပို့ကုန်လည်း တင်ပို့တာတွေရှိပေမယ့် သွင်းကုန်ကတော့ ပိုများတာပေါ့။ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ကုန် သည်လေးတွေအတွက် အဆင်ပြေ တယ်”ဟု ပြောသည်။
မော်လမြိုင်၊ ကျိုက်မရော၊ ချောင်းဆုံနှင့် ပေါင်မြို့နယ်မှ စစ်မှုထမ်းဟောင်းအဖွဲ့ဝင်များစုေ?
မဏိပူရမြစ်ကူး မံဆောင်းတံတား ရေရှည်ခိုင်ခံ့ရေး နိုဝင်ဘာလကုန်မှ စ၍ တန်ပိုကားများ ဖြတ်သန်းခွ